xakamaynta dareeraha 60w 12pcs wuxuu iftiimiyaa mashiinka caddeeya mashiinka
Mashiinkaani ilkaha caddeeya ayaa ah midka ugu fiican kan ugu awoodda badan, 60w, 12pcs guluubka buluugga buluugga ah, xakamaynta badhanka xakamaynta dareeraha, aragtida raaxada, mashiinka ilkaha ee dhamaadka ilkaha sare, waxaan raadineynaa wakiillo, haddii aad xiiseyneyso, fadlan noo soo dir baaritaan .
DNS Derma Roller 192 cirbadeynta microneedling
DNS 192 derma roller wuxuu leeyahay laba nooc oo baakado kala duwan ah. mid waa sanduuqa kartoonka, midna waa tuubo caag ah. waxaad dooran kartaa xirmada aad jeceshahay. sanduuqa kartoonka waa cabir yar, wuxuu keydin karaa kharashaadka rarka inta lagu gudajiro.
6 ka mid ah 1 xirmada duubista barafka
6 ka mid ah 1 xirmada rullaluistemadka barafka waa mid aad u xirfad badan oo loo yaqaan 'derma roller' oo loogu talagalay isticmaalka guriga iyo isticmaalka salon.
Waxay leedahay madaxa rullaluistemadka barafka, 600 madaxa cirbadda, madaxa burushka, madaxa irbadda 120 iyo 12 madaxa shaabbada cirbadda.
ilkaha caddeeyo mashiinka TE120 leh ama aan lahayn kaarka
Mashiinkaan la caddeeyay waa mid caan ah sanado badan. waxay ku leedahay 12pcs laambado yar yar oo madaxa ah waxayna isticmaali kartaa kaarka RF IC, ama kaarka RF IC la'aan hadaadan u baahnayn.